2017 May | somalisc
05/26/2017 Uncategorized No comments
Waa 18 talo oo aan ugu talagalay qofka qaba cudurka macaanka bisha ramadaan.
Hooyada macaanka qabto oo uurka leh waxaa haboon inaysan soomin illaa uu dhakhtar u fasaxo mooyee si loo xafido caafimaadkeeda iyo midka uurjiifkeeda.
Qaadashada cirbadda insulinta iyo tallaalka ma jabiyo soonka sida culumada badankeed ay qabaan
Dadka qabo macaanka nooca 2-aad badanaa si aan dhib lahayn ayay u soomi karaan haddii aysan xanuuno kale jirin.
Dadka qabo macaanka nooca 1-aad waa in ay taxaddar muujiyaan ayna qaataan talooyinkaan hoose inta aysan go’aansan soonka.
Waa qasab qofka qaba macaanka oo rabo inuu soomo in caafimaadkiisu uu u saamaxayo, waana in aysan sokortaadu ahayn mid wareersan oo markay rabto kacayso ama dhacayso.
Bukaannada qaar waxaa lagula taliyaa in cabirka insulin-ta ay yareeyaan, ama nooceeda la badalo si aysan sokorta u dhicin xilliga soonka.
Waxaa laga yaabaa in dhakhtarka uu kugu la taliyo qaadashada insulin-ta degdegta ah xilliga afurka si sonkortaada loo xakameeyo, laakiin waa in dhakhtarkaaga la tashataa marka hore.
Qofka macaanka qabo waa qasab in uusan suxuurta ka tagin, weliba cuno cunto tayo leh.
Qofka macaanka qabo ee sooman waa inuu badsadaa cabitaanka badan ee aan sokorta lahayn, waana inuusan hal mar wada cabin oo habeenkii loo qeybiyo.
Qofka macaanka qabo waa inuu saxuurta dib dhigto oo addinka oo wax yar dhiman cunaa.
Cunnooyinka badanaa soonka la cuno sida burka, sambuuska, timirta iyo qaraha waxay ku xiran tahay macaankaaga noociisa iyo sidaad u xakamaysid, badanaa dadka sokortoodu dagan tahay, daawadane joogteeyo way ku afuri karaan timirta iyo qaraha aan la shiidin, hal xabo oo bur ama sambuus ahne way isticmaali karaan laakiin waa in daawada sokorta aysan hilmaamin, haddii aad dareentid in sokortaadu ay aad u kacayso markii aad isticmaashid cunnooyinkaas, waxaa haboon in aad ka fogaatid.
Qofka macaanka qabo markuu afuraayo wuxuu qaataa 3 xabo oo timir ah iyo biyo caadi ah, kadib salaada maqribka ayuu dukanayaa, kadib wuxuu qaadanayaa daawadiisa inta uusan bilaabin cunno culus.
Haddii daawadu ay tahay laba waqti, waa inuu qofka suxuur fiican cunaa, kadibne daawada uu qaato.
Haddii daawadu ay ahaan jirtay 3 waqti waa in laba waqti laga dhigaa adigoo la kaashanayo dhakhtarkaaga.
Haddii aad daawada Insulin-ta aad qaadatid, cabirka badan waa xilliga afurka, cabirka yarne waa xilliga saxuurta, tani waxay kugu caawinaysaa inaysan sokortaada kicin habeenki aysanne dhicin maalintii.
Haddii insulin-ta aad qaadatid ay thay middii halka jeer la qaadan jiray waa in aad xilliga afurka kaliya aad qaadatid.
Waa muhiim in aad ogaatid astaamaha sokorta dhacsan sida gaajo siyaado ah, wareer, dhidid badan, tabardarri, xanaaq, madax xanuun, aragga oo calaw ama caad yeesho, haddii aad isku aragtid astaamahaas waa qasab in aad soonka furtaa xittaa haddii afurku uu wax yar ka dhiman yahay, ajarkaagane waad heli doontaa ilaah idinkii.
Haddii xanuun dartiis aadan la soomi karin ogow in niyadaada lagugu ajar siinayo, adigoo afur kuu banaanyahay xanuun dartiis, haddii aad soon isku qasabtid oo dhibaato kaaga timaado, dambi ayaa kaaga imaan karo.
05/26/2017 Special, Uncategorized No comments
TARTAMADA RAMADAAN EE JAALIYADAHA SOOMAALIDA
Somalida Qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha ku jira waxay aad iyo aad u xiiseeyaan cayaraha, qaasatan kubadda cagta. Dhalinyarada cayaarta kubadda cagta ee ku nool gobolada dalka iyo dibadda waxay ka siman yihiin in ay isku waqti(rammadaanka) wada ciyaaraan. Waxay kaloo ka siman yihiin in taaheerayaasha tartamada ay soo camiraan garoonka, iyadoo ujeeddada ka dambaysa ay tahay waqti gaabsi iyo Afur ku sugid.
Sida aan ognahay Somaliya sanadkaan waxaa ka dhacay abaaro iyo cuduro kala duwan. Maaddaama dadkii ay u dhammaanayaan gaajo iyo cudur tallo waxaan soo jeedin lahaa, meel walba oo lagu ciyaarayo TARTANKA RAMMADAANKA in la kordhiyo lacagaha is diiwan gelinta kooxaha. Kharashka halkaasi ka soo baxa in lagu taakuleeyo shacabka baahan ee abaaraha waxyeeleyey iyo kuwa cafimaad darada haysa.
Waan hubaa in dhalinta Soomaaliyeed ay aad u naxriis badan yihiin ayna mar walba taageeraan dadkooda dhibaataysan. Fadlan waxaan kaa codsanayaa in fariintan aad u gudbiso dhamaan jaalliyadaha, dhammaan kooxaha, dhammaan ciyaartoyda, dhammaan macallamiinta, dhammaan maaulka, dhammaan taageerayaasha iyo dhammaan garsoorayaasha sportiga.
DIYAARIYE: Khabiir Sport, Dr,Abdulkadir Caddaay
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 7477863 bytes) in /home/content/91/10019591/html/wp-includes/wp-db.php on line 1173